PREVENTION IS BETTER THAN CURE. EVENTS HAVE WELL WITNESSED THAT MEDIAS ARE TROUBLE MAKERS & NEVER TRUSTWORTHY. MEDIAS SHOULD BE UNDER STATE CLOSE WATCH & CONTROL FOR PEACE & HARMONY IN THE NATION.
သတင်းသမားတွေဘက်ကလဲ အရည်အသွေး မီသူတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ကင်မရာကောင်း ကိုင်နိုင်၊ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တတ်ရုံ၊ မေးတတ်မြန်းတတ်၊ စာရေးတတ်ရုံနဲ့ သတင်းသမား မခေါ်နိုင်ဘူးလေ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ သတင်းသမားဆိုတာ Journalism ဘာသာနဲ့ ဘွဲ့ယူထားရတာ၊ ဘယ်လို သတင်းမျိုး ဘယ်လို ရေးရ၊ ရိုက်ရမယ် သင်ထားရတာ။ ပုံပျက်ပန်းပျက် ဒဏ်ရာရသူ၊ သေဆုံးသူတွေ ပုံ ထည့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ သတင်းကို ကိုယ်လိုရာ ဆွဲ ရေးတင်ရတာ မဟုတ်ဘူး။
May 03, 2016 03:31 PM